Talooyin ku saabsan sida loo illoobo qofkii kaa horreeyay - Tilmaamaha ragga | Ragga Stylish
Waan ognahay in jaceyl jabo maaha mid ka mid ah daqiiqadaha ugu fiican nolosha in aan la kulmi karno. Jacaylka aan u dareemno dadka kale waa wax aad u qaas ah, waana marka aan jacaylka leenahay waxaan rabnaa inaan rumeyno inay waligeed ahaan doonto. Inaad iloowdo saaxiibkaa hore waa marxalad kale oo adag oo laga gudbo, kala tag ka dib.
Ma naqaano sida looga guuleysto ama loo maareeyo xaaladdan, xitaa xitaa waan ognahay sida loo aqbalo waxa dhacay. In kasta oo xiriirku aakhirkii uusan ahayn mid waara duruufaha kala duwan awgood. ma naqaano sida looga gudbo. Sidoo kale ma naqaano sida loo helo caqli gal xanuunkeena waana taas marar badan waxaa naga adkaaday ku xirnaan in aan u dareennay qofkaas.
1 Maxaan u ilaabi waayey?
2 Qiyaaso cadaalad ah oo ku saabsan sida loo iloobo qofki hore
3 Tallaabooyin adag oo looga gudbayo
Maxaan u ilaabi waayey?
Xaqiiqdii waxaa jira su'aalo badan oo xaaladaada oo kale ah. Waxaa jira sababo badan ama aad u gaar ah taas oo aadan u maleyn karin, laakiin waxaa jira cadeymo cad waana taas markii aad jeceshahay waxaad leedahay aragti ka duwan qofkaas. Waxaa laga yaabaa inaad adigu aad u aragto wax ka badan intaad moodeysid oo wanaaggeeda uu ahaa mid xad dhaaf ah, malaha waad ilowday ceebahooda.
Qorshahaaga mustaqbalka qofkaas waxay ahaayeen dhalanteedyo waawayn. Waxaad qiyaastay inaad reer yeelato, oo aad nolol deggan oo deggan kula noolaato. Waxaa laga yaabaa in himilooyinkaaga nin ahaan hadheeyay rabitaanka inaad wadaagtaan qorshayaashiina. Sidan ayaad umuuqataa mid lumay oo wareersan iyo hadda ma rabto inaad bedesho qaab nololeedkaaga.
In kasta oo ay adiga kuguula muuqan karto wax qariib ah, haddana waxay noqon kartaa taas noqo danaysi. Xanuunka weyn wuxuu kordhin karaa hanka dadka iyo kiiskan adigaa iska leh. Waad rumaysan kartaa inuu qofkani ku jiro gacantaada, laakiin waa inaad Go'aannadaadu ha qulqulaan oo ha noqdaan dhexdhexaad. Cabsida kalidaa waa wax taas naga yeel cidlo, waxay na dareensiineysaa barakac iyo badbaado la'aan.
Qiyaaso cadaalad ah oo ku saabsan sida loo iloobo qofki hore
Aqbalaada waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya. Kuma tixan kartid naftaada dareenkaaga, waxa aad dareento, laakiin mar iyo dhammaanba waa inaad qaadataa ogolaanshahaas. Ha ku wareerin is casilaad, maxaa yeelay tani waxay abuuri kartaa shaki iyadoo la doonayo in la isku dayo dib u heshiisiin suurtagal ah. Haddii aad aragto in natiijooyinka aan la inkiri karin oo aysan jirin meel looga baxo fursad cusub, aqbaliddu waa cabirka ugu fiican. Mustaqbalka fog way naga tagi doontaa aragtida mustaqbalka si aad uga wanaagsan isla markaana u furan khibrado cusub.
Waa inaad miisaan miisaanka xun ee keenay xaaladdan oo kale. Marwalba diirada kama saari kartid dhammaan wanaagga udhaxeeyey labadooda, laga yaabee sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo fiiri sida uu xiriirkaas u dhaawacay.
Inaan mashquul kugu ahaado waa soo jeedin dhammaystiran inaad awoodo inaad sameyso wixii aad markasta soo jeedisay. Ha dareemin dambi wixii dhacay, raadso xadkaaga iyo naftaada dhexdeeda kula soo bax hawlo ama daraasado aad jeceshahay oo kaa caawin kara inaad naftaada horumariso. Haddii ka hor intaadan la kulmin qofkaas aad horey u lahayd hadafyo dhowr ah, hadda waa waqtiga ugu fiican ee aad mar labaad iyaga muhiimad siiso.
Beddel jadwalkaaga, hadda waxaad haysataa waqti badan oo dheeraad ah waqti qaado naftaada. Samee nashaadyo cusub oo ku dhiirrigeliya, u baxa oo ku hareereeya dad cusub.
Raadi noocyo kale oo caadooyin ah iyo dibadda ku jimicsado. Cayaaruhu waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loo maro Maskaxda iyo Jirka isku habee. Waan ku caawin doonaa xanuunku wuxuu u socdaa si ka wanaagsan, haa, waqti iyo edbin leh. Tan habeen iyo maalinba lagama adkaan karo.
Tallaabooyin adag oo looga gudbayo
Sida ugu wanaagsan ee looga gudbi karo ayaa ah iyadoo laga fogaanayo xiriir wadareed iyada. In kastoo aad jeceshahay inaad ka ag dhowaato iyada, tan ayaa noqon doonta habka ugu wanaagsan ee maskaxda looga saaro. Sidan waxba kama ogaan doontid wax ku saabsan iyada sidaas darteedna waxba kuma yeeli doonaan wax kasta oo ay ku sameyso nolosheeda cusub. Ka saar xitaa dhamaan waxyaabaha ku xusuusinaya iyada… Sawiro, hadiyado ama wixii kale ee la xiriira.
Raadi caawimaad xirfad leh Haddii aad u malaynayso inay tahay xaalad aanad runtii ka adkaan karin, waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee looga gudbi karo. La bax saaxiibbada, kuwa aad ku kalsoon tahay. Ragga waxaan jecel nahay inaan galno godkeena, laakiin dibedda ka raadi kalsooni una sheeg xaaladdaada adag. Isku day inaad u maareeyso talada ay ku siinayaan sida ugu fiican ee ugu macquulsan, yaan xanaaqa kugu qaadin.
Naftaada ha lagu jeclaado, waa xeelad shaqeynaysa. Waqtigaaga qaado oo ha ku sameynin waajibaad, laakiin aamin, maxaa yeelay runtii waa wax la taaban karo. Raadi xiriirada asxaabta kale ee hore iyo Raadi xiriirro, xodxodasho oo naftaada sheeg. Waa inaad u baxdaa adduunyo cusub oo fursado leh.
Talo ahaan kama dambaysta ah, dhaqan ay tahay inaan qiimeyno ayaa ah wax ka baro khaladaadkeena. Isku day inaad falanqeyso waxaad khalad sameysay iskuna day inaad qiimeyso ilaa iyo heerka ay gaarsiisan tahay uma baahnid inaad markale ku beertid mustaqbalka. Dabcan, ha dareemin dambi wixii dhacay, markasta inaad naftaada ku celceliso markan oo kale waxay kaa dhigeysaa inaad si joogto ah u soo degto, waa inaad sare u qaaddaa kalsoonidaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Talooyin ku saabsan sida loo iloobo qofkii aad ka soo tagtay